Semalt - Nkwalite SEO kachasị
Nkwalite ngwa ahịa ma ọ bụ ọrụ site na ịntanetị site na iji weebụsaịtị gị bụ usoro dị irè maka mgbasa ozi n'ihi ọsọ na-enweghị atụ, mpaghara mkpuchi, yana mma. Ndị ụlọ ọrụ Semalt SEO na -enye nkwado maka weebụsaịtị. Onye ọchụnta ego / nwanyị ọchụnta ego na-aga n'ịntanetị chọrọ inweta ọtụtụ ndị ahịa dị ka o kwere mee ma mee ka ebe nrụọrụ weebụ ya na-adọta okporo ụzọ dị ka o kwere mee. Ndị ọkachamara Semalt nwere ike inye aka na ọrụ a. Companylọ ọrụ anyị karịrị naanị njikarịcha SEO, ọ bụ nnukwu ihe zuru ụwa ọnụ maka nkwalite mkpokọta weebụ.
Nkwupụta nkwuwa okwu dị otú a abụghị ihe efu. Gụọ nzaghachi ndị ahịa na weebụsaịtị anyị, lelee ọnọdụ dị adị, ị ga-ahụkwa na ọ bụ naanị Semalt nwere ike ịnagide ọrụ ahụ n'ụzọ ka mma. Site na arụmọrụ anyị, anyị na-akwalite weebụsaịtị gaa n'ọkwá kachasị elu na igwe ọchụchọ ma na-enyere ndị nwe ha aka ime onwe ha ọgaranya. N'ezie, na-enweghị teknụzụ mbepụ, ị gaghị enweta ihe ịga nke ọma, ọ bụ ya mere Semalt akwụsịghị ebe ahụ. Anyị na-emeziwanye usoro anyị, na-azụlite teknụzụ ọhụrụ. Semalt enweghị ndị asọmpi ha nhata ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịga nke ọma site na mmepe websaịtị - mee ya na Semalt.
Ejiri ụlọ ọrụ anyị gosipụtara ọkwa dị elu nke arụmọrụ dị mma nke ụzọ ntanetị kachasị. Ọ baghị uru iweta arụmụka, anyị tụkwasịrị obi naanị n'ihe ndị bụ eziokwu, nke nsonaazụ na-aga nke ọma. Ruo afọ iri, anyị anọwo na-eche ihe ịma aka kachasị egwu ma na-eme mkpebi ziri ezi mgbe niile. Nkà nke mmeri dị n'ọbara ụlọ ọrụ ahụ. Ndị otu Semalt bụ otu ndị ọkachamara na klaasị ụwa. N'ime ha bụ ndị ọkachamara SEO nwere ahụmahụ, ndị njikwa ruru eru, ndị ọkachamara IT, ndị na-ede akwụkwọ nwere ikike, na ndị na-ese ihe.
N’agbanyeghi icheiche di iche iche, ndi otu n’otu niile maara otutu asusu uwa ma tozuru oke na njiri SEO. N'ime usoro nke imepụta otu tozuru etozu, ndị otu ahụ nwere ahụike na-eburu n'uche ụdị ụdị parameters na-emetụta arụmọrụ weebụsaịtị. Ọ dị mkpa inwe echiche usoro, ebe saịtị ọ bụla na-ewepụta otu ikpe, ya mere, ọ chọrọ usoro na usoro nke SEO-njikarịcha.
Nyocha Nyocha SEO
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta (SEO) bụ otu n'ime ụzọ iji bulie okporo ụzọ ezubere iche na nnabata nke weebụsaịtị. Ọ bụghị otu usoro, mana ọtụtụ ọrụ ezubere iji meziwanye ọnọdụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị na igwe nchọta na arịrịọ ụfọdụ. Ọbụna saịtị dị mma chọrọ ịkwalite, ma ọ bụghị ya, ndị na-ege ntị na ntanetị agaghị ama maka ịdị adị ya. Nke a bụ ebumnuche nke nkwalite SEO.
Taa, SEO na-aghọwanye ihe na-adịghị adị. Nke bụ eziokwu bụ na nchọta ọchụchọ ndị ahụ na-agbagha agbagha mgbe niile, yabụ na-apụtachaghị mgbe arịrịọ ole dị mkpa iji jupụta ederede maka injin nchọta ahụ iziga ya na elu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, igwe nchọta ọchụchọ na-elele ka esi elele ọdịnaya ahụ site n'aka ndị ọbịa webụsaịtị. Ihe ndị ahụ nwere ike ịgụta ọnụ. Nke a bụ oge ego mmadụ na-etinye na weebụsaịtị yana ntụgharị site na njikọ nke esịtidem. Ọ dịkwa mkpa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ ekerịta njikọ na blọọgụ nrụọrụ weebụ, netwọkụ mmekọrịta, na nyiwe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ozi dị na peeji ahụ adịbeghị anya, onye ọbịa ga-emechi ihe ndị enyere gị aka. Oburu na onye obia ahu huru peeji nwere ederede siri ike juputara na nkebi ahịrịokwu - ya ga - ahapu ya. Nhọrọ nke uzo nke nkwalite SEO dabere na ebumnuche ya. N'ọtụtụ oge, ndị ahịa chọrọ mmụba nke ndị ọbịa na weebụsaịtị ha nke na-ebute uto nke oku, iwu, ahịa. Mana enwere ndị ahịa dị otú a, bụ ndị na-achọ ịhụ saịtị dị na ọkwa dị elu na ọdụ ọchụchọ ahụ na-achụ ebumnuche ika. Semalt nwere ngwọta dị mma maka nke ọ bụla. Anyị ga-elele mkpọsa kachasị arụ ọrụ na nkwalite SEO, dịka AutoSEO na FullSEO.
Kedu ka AutoSEO si arụ ọrụ
Mgbasa ozi nke AutoSEO maka nkwalite weebụ abụrụla nke zuru ebe niile n'etiti ndị nwe saịtị ahụ n'oge na-adịbeghị anya. A na-atụle nsonaazụ ikpeazụ iji kwalite weebụsaịtị gị n'ọkwá kachasị elu na igwe ọchụchọ. Ọ mejupụtara ọtụtụ ọkwa dị mkpa ma a na-eme ya na mmekọrịta siri ike na ọkachamara Semalt. Ndị ọkachamara na-ewere ọrụ zuru oke maka mkpọsa ahụ ma na-ekwe nkwa ihe ga-aga nke ọma. Nhazi mkpokọta weebụ ga-agbanwe ngbanwe na-eduga n'inwe ọganihu pụtara ìhè na nchọta ọchụchọ. Na-agbakọta ọrụ na-abịanụ, anyị nwere ike ịkọwapụta ọrụ AutoSEO ndị a:
ịhọrọ isiokwu kwesịrị ekwesị;
mgbazi mmezi nke ebe nrụọrụ;
na-eme njikọ njikọta na weebụsaịtị ndị nwere ntanetị;
nkwado ndị ahịa.
Iji malite mkpọsa AutoSEO, ị ga-edebanye aha na weebụsaịtị anyị. Nchịkọta weebụsaịtị na-amalite ọrụ, ị na-enweta nkwupụta mbụ banyere ọnọdụ saịtị gị na igwe nchọta. A na-enyochakwa ihe owuwu weebụsaịtị ahụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ SEO niile. Continue na-aga n'ihu na-anata akụkọ site na ozi dị iche iche, gụnyere ndepụta nke njehie ndị akọwapụtara. Ntinye aka gị na usoro a ka dị ntakịrị, na-ewepụ nhichapụ njegharị site na injinia SEO anyị. Onye injinia SEO ga-ahọpụtakwa Keywords ziri ezi. Nke a dị mkpa iji mee ka okporo ụzọ weebụ dịkwuo elu.
Ugbu a ọ dị mkpa ịhọrọ njikọ ntanetị n'ụzọ ziri ezi iji tinye ha na ụfọdụ usoro ntanetị. Ihe ndị dị na weebụsaịtị kwesịrị ịdị oke mkpa, dị ka inyocha ọchụchọ na-amata naanị ọdịnaya ahụ bara uru. Semalt lekwasịrị anya na ịhọrọ akụrụngwa ndị dị mkpa maka ntinye njikọ ọzọ. Omume niile nke ọkachamara ahụ mere bụ ihe na-adịghị emerụ ahụ nke weebụsaịtị ahụ; ewezuga onye njikwa ahụ na-enyocha usoro ahụ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ime mgbanwe ndị dị mkpa na weebụsaịtị. A na-eduzi ndị ọkachamara site na akụkọ sitere na mkpesa na FTP (Protocol Transfer Protocol). Mgbanwe ọ bụla na-eme ka njikarịcha arụpụta ihe dị mma, yabụ na ngalaba a chọrọ ọmarịcha ihe ọmụma na nkwalite SEO na izu oke. Semalt maara mmelite ogo niile yana itinye igodo dị mkpa na oge. A na-enyocha akara okwu iji kwekọọ ọdịnaya ahụ tupu itinye. Njikarịcha na-aga n’ihu; ị ka ga - eme ka ị na - elele nsonaazụ ọma. Conme mkpọsa AutoSEO n'ime otu ọnwa na-akwụ $ 99.
Ihe ichoro ima banyere FullSEO
Site na nmalite, ekwesịrị ịdeba ama na mkpọsa nke FullSEO bụ njikarịcha weebụsaịtị n'ime ntakịrị ntakịrị oge ọ bụla. Mgbasa ozi ahụ na-eme ka mkpokọta weebụsaịtị dị na mpụga na nke ime. Usoro a na-etinye ọtụtụ nkebi ebe onye ọ bụla n'ime ha na-ezube iweli ogo weebụ. Mgbasa ozi nwere ahụmahụ na-elele mkpọsa ahụ, ebe ndị ọkachamara SEO na-eme ihe ndị ahụ ozugbo. Ekwenye na arụmọrụ nke FullSEO site na nsonaazụ ọsọ ọsọ nke ọkwa dị elu nke weebụsaịtị na igwe ọchụchọ. Ọzọkwa, ọ naghị ekwe ka ndị asọmpi gị nwee ike ịbịaru nso na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Mmalite nke mkpọsa nke FullSEO na- amalite ozugbo ị debanyere aha na weebụsaịtị anyị. Ndebanye aha zuru ezu pụtara mmalite nke nyocha weebụsaịtị. Agba nke mbụ bụ njikarịcha n’ime ime. Ọ gụnyere ịlele usoro nke weebụsaịtị wee nye akụkọ zuru oke na nsonaazụ nyocha ahụ. Ọzọkwa, onye ọkachamara SEO na-enyocha ngwa niile nke saịtị ahụ ma na-ekpebi usoro ọmụmụ ọmụmụ. Akụkọ na-esote gosipụtara njehie niile akọwapụtara, nke a na-agbazi ozugbo. Ọdịmma na-aga n’ihu. Iji mee ka okporo ụzọ weebụsaịtị dịkwuo elu, anyị kwesịrị iburu akara okwu dị mma. A na-eji ezigbo nlezianya họrọ mkpụrụokwu niile, ebe ha na-arụ ọrụ dị mkpa na nkwalite ahụ. Site na ịnweta FTP, ọkachamara na-eme mgbanwe ndị achọrọ na weebụsaịtị.
Agba nke abụọ bụ njikarịcha nke mpụga. Ọ gụnyere itinye njikọ na akụrụngwa bara ụba. Ọ dị mkpa na ọdịnaya gị dabara na akụrụngwa ndị ahụ. Ozugbo etinyere njikọ ndị ahụ, webụsaịtị ahụ na-ebido imeziwanye ya. Nnukwu ibu ọrụ dị na ndị ọrụ SEO anyị na usoro nke ịhọrọ njikọ ziri ezi na akụrụngwa a pụrụ ịdabere na ya. Ọ dabara nke ọma, Semalt na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ weebụsaịtị gosipụtara nke na-emezu ụkpụrụ SEO. Njikọ ndị etinyere n’ime saịtị ndị a na-atụnye ụtụ n’inwe ihe ịga nke ọma. Ọrụ mkpọsa gị adịghị mkpa, mana ị na-ama mgbe niile mgbanwe niile dị na weebụsaịtị. Akụkọ mgbe niile na-agwa gị maka mmụba ọkwa ogo. Ọzọkwa, ịnwere ike ịkpọtụrụ ọkachamara mgbe ọ bụla ịchọrọ ozi ọ bụla metụtara saịtị gị.
Ọ bụrụ, n'ihi ihe ụfọdụ, kwụsịtụrụ ịkwalite SEO, ọ gaghị eweta nnukwu nsogbu. N’ezie, Google ga-ewepụ backlinks na ebe ndebe data n’ihe dị ka otu ọnwa, mana ọkwa ga-adịgide n’otu ọnọdụ. Ọnọdụ a adabaghị n'okpuru ọkwa ahụ dị tupu ịmalite FullSEO. Iji gbakọọ ọnụ ahịa ọrụ ahụ, ị ga-ebu ụzọ mee mkpebi. A ga-ekpebi ọnụahịa ikpeazụ mgbe ndị ọkachamara SEO nyochachara nyochaa weebụsaịtị gị. Ọnụahịa ahụ agaghị adị oke, mana ọ dabere na steeti weebụsaịtị gị. N'ọnọdụ ọ bụla, mmefu niile na-akwụ ụgwọ ugboro atọ ọnụahịa ahụ.
Isi iwu nke njikarịcha SEO bụ atụmatụ ziri ezi. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ juputara na njehie ndektị ma nwee nsogbu ọrụaka, naanị ụzọ ọ ga - esi pụta bụ ịnakọta data nyocha. Semalt emepụtara usoro nyocha pụrụ iche nke na-enye ohere ịme njikarịcha kachasị arụ ọrụ. Nke a bụ nchịkọta nyocha, usoro nyocha ihe ntanetị pụrụ iche nke na-eduzi ịchọpụta njehie teknụzụ yana mgbazi ha. Nzọụkwụ niile ewerere ga-atụnye ụtụ n'inwe ihe ịga nke ọma nke weebụsaịtị. Ọzọkwa, nchịkọta na-enye ohere ịnweta weebụsaịtị nke asọmpi gị. Nchịkọta gụnyere ọrụ ndị a:
nlele nke ika;
nyocha isi okwu nyocha;
ndị na-asọrịta mpi;
Nchịkọta amachaghị na ịchọpụta ihe isi ike ndị metụtara ijikọ weebụsaịtị. Nke mbu, o na-ekpebi ederede ederede nke ihe ndi ozo. Ọ na-eduzi nyocha nke weebụsaịtị nke ndị asọmpi, na-atụle uru na ọghọm ha. Nchịkọta nyocha na-amalite mgbe edebanye aha na weebụsaịtị anyị. Akuko mbu gosiputara onodu saịtị gi na igwe ihe nchoputa. A na-enyochakwa ebe nrụọrụ weebụ ndị asọmpi gị. N'ihi ya, a na-ahụta ọdịdị nke ihe ha dị iche iche kpamkpam. Na ndabere nke ozi a, ndi okacha mezuru mgbanwe ndi kwesiri, n’iburu n’uzo SEO.
Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo akaụntụ, ịnwere ike itinye saịtị ndị ọzọ na kansụl gị. A na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ niile agbakwunyere na-akpaghị aka, ị na-enweta akụkọ zuru ezu na data achọpụtara. A na-emelite ihe ntanetị igwe nchọta a na-enyocha ihe nchọta, yabụ naanị ndị nyocha anyị maara kpomkwem otu esi agbanwe ebe nrụọrụ weebụ ka ọ nọrọ n’elu kacha elu n’igwe nchọta ahụ. Site na ikpokọta data nyocha, ọ ga-adị mfe ịkọwa mkpụrụokwu kwesịrị ekwesị. Nchịkọta na-akọwapụta isiokwu ndị kwekọrọ na ọdịnaya weebụ. N'oge ọ bụla, ịnwere ike itinye mkpụrụokwu ndị ọzọ ma ọ bụ wepu ndị na-enweghị isi. Usoro a ga - enwe mmetụta dị mma na uto nke okporo ụzọ weebụsaịtị.
A na-eduzi usoro nyocha ahụ gburugburu elekere na-enweghị òkè gị. You na-enweta akụkọ mmemme yana nsonaazụ nke omume niile. Nsonaazụ a na-atọ gị ụtọ mgbe niile, maka na ị na-ahụ ihe na-aga nke ọma na ebe nrụọrụ weebụ na igwe nchọta. Na-ahụ ọkwa nke ndị asọmpi gị, yana nchịkọta na-eme ihe na-enye ohere ka weebụsaịtị gị karịa karịa ha niile. Nke a bụ eziokwu doro anya, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-anọ n'ọnọdụ ọ bụla. Ọ dị oke mma iji Sistem Nrụpụta Ihe. Site na API, a na-emekọrịta data niile na akpaghị aka. Na-ahụ maka mmelite a, ọ bụ ezie na ị na-eme mgbalị. Enwere ụgwọ akwụkwụ ọtọ maka ọrụ nyocha. Semalt emepụtala nchịkọta nchịkọta ndị a:
STANDARD - $ 69 kwa ọnwa (isi okwu 300, oru ngo 3, akụkọ ọnwa ọnwa 3);
ỌR - - $ 99 kwa ọnwa (1 000 isi okwu, ọrụ iri, akụkọ ntolite afọ 1);
PREMIUM - $ 249 kwa ọnwa (mkpụrụokwu 10 000, ọrụ akparaghị ókè).
Semalt na-enyekwa ọtụtụ ọrụ mmepe weebụ. Ndị ọkachamara ahụ na-etinye ụzọ dị iche iche maka mmepe weebụsaịtị weebụ. Ya mere, ejiri websaịtị ihe eji arụ ọrụ, emebere ya na ngwa ndị ọzọ na Sistemụ Njikwa ọdịnaya. Nnukwu arịrịọ ndị ahịa na-ekpuchi onyinye ndị dị ka modul elektrik e-commerce ma ọfụma dị elu.
Vidiyo nkwado site Semalt
Azụmaahịa na-aga nke ọma naanị mgbe ngwaahịa ya na-ebute nzaghachi obi n'ime ndị na-azụ ya. Vidiyo Ad bụ usoro a na-ahụkarị nke na -eme ka njiri dị mma nke ngwongwo na ọrụ mgbasa ozi. Videodị vidiyo a na-ewetakwu okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị, ọ bụ ya mere Semalt ji wepụta Production Video Production . Vidio anyị mepụtara na-egosi uru niile ụlọ ọrụ gị bara. Anyị na-enye nhọrọ vidiyo atụrụ anya na site na mmasị gị. Ọnụahịa maka nhọrọ nke abụọ dị iche ma kpebisie ike mgbe a tụlechara ọrụ ahụ. Vidiyo na-akwado nkwalite azụmahịa gị ozugbo.
Isiokwu ahụ gosipụtara nke ọma uru dị n'iso Semalt rụọ ọrụ. N’ezie, uru bara uru karị. Ọ dịghị mgbe anyị na-enye nkwa na-abaghị uru, n'ihi na isi ihe abụghị naanị na njikarịcha weebụsaịtị. Anyị kpebisiri ike ime ka ị baa ọgaranya n'ụzọ niile dị. Ọganiihu gị bụ ọganihu anyị, yabụ bulie azụmaahịa gị na Semalt. Etula oge gị. Kpọtụrụ anyị ozugbo. Anyị nwere mkpịsị ugodi nke ịga nke ọma gị!